Volcanoids: nyowani yekuvandudza yeiyo steampunk uye yekupona zita | Linux Vakapindwa muropa
Volcanoids: nyowani steampunk uye yekupona zita rekuvandudza
Ichokwadi inonzwika senge iwe watove Volcanoids, vhidhiyo yemutambo zita inounza pamwechete akanakisa emitambo yekurarama neiyo steampunk genre. Ndokunge, zvinyorwa zvinyorwa zvakazvarwa mukati mesainzi yenhema uye zvakabuda muma80s kubva muruoko rwevamwe vanyori vecyberpunk. Musiyano neuyu ndewekuti iwo wakagadzwa munyika umo hunyanzvi hwehunyanzvi hwakawanda.
Muchiitiko cheVolcanoids, iwo musoro unowanikwawo mu chitsuwa chakaputika gomo uye yakagadzira nharaunda ine hukasha maunofanira kuedza kurarama. Uye zvakare, iwe unenge uine mabhora pazvigunwe zvako zvekutenderera nezviitiko sezvaungaona mune inotevera vhidhiyo ...
Makomo anoputika mazviona inowanikwa kwauri pane Steam (iine 25% kuderedzwa kusvika Ndira 25, 2021), uye zvino nhau ndeyekuti ine yekuvandudza kukuru ine zvemukati zvekurwa. Mushure meKutanga Kuwana, mutambo wakaramba uri mumushandira pamwe, asi ikozvino wawedzera masimba ekurwisa kuti uwedzere kunakidza. Kugadziridza kukuru kuri kuvhundutsa maererano nezvitsva. Mashoma akakura seichi.
Se ivo vakawedzera kuwanda kwesarudzo yezvombo, sekuvavarira pasi, kudzoreredza, kudonha uye kupararira kwemabara, zvinorova zvinorova, mapurojekiti chaiwo, mifananidzo mitsva, zvombo zvitsva, uye yakareba nezvimwe. Vavengi vakagadziridzwawo, vachive nehunyanzvi hwekukuyedza.
Muvengi COG marobhoti zvikamu izvozvi zvakare zvine zvigadzirwa zvitsva uye kugadzirisa. Iwe zvakare uchawana kumwe kubiridzira kutsva, kumwe kurira kwemhedzisiro, kunovaka turrets, uye kunyangwe defibrillator kudzorera shamwari dzako kuhupenyu.
Saka, ikozvino ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo ye kupona uye nyika yakavhurika zvinonakidza zvakanyanya panguva ino, pamwe naValheim. Zvirinani izvo zvinoenderana neLinux. Uri kuzoipotsa here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Volcanoids: nyowani steampunk uye yekupona zita rekuvandudza